ရေကြီးခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၆၃၄ ခုနှစ် ဂျာမနီနိုင်ငံ နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ မြောက်ပင်လယ် ကမ်းရိုတန်းများတွင် ရေကြီးပုံကို ရေးဆွဲထားသော ယနေ့ခေတ် ပန်းချီကား
၁၈၆၅-၁၈၇၆ ဂျာဗားကျွန်းတွင် ရေကြီးသောကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူများ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ဒါဝင်မြို့တွင် မုတ်သုံမိုးနှင့် ပင်လယ်လှိုင်းကြီးမှုကြောင့် ချောင်းငယ်လေး တစ်ခု အတွင်း ရေလျှံနေပုံ
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ အဗ္ဗဒူလာဘုရင်လမ်းကို ဖုံးလွှမ်းနေသော ဂျက်ဒါ ရေကြီးမှု
၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဝီလ်မာကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ကီးဝက်စ်မြို့ အနီး ရေလျှံနေပုံ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ဘရာဇီးနိုင်ငံ လမ်းတစ်လမ်းအတွင်း ရေလျှံနေပုံ
အချိန်အနည်းငယ် အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရုတ်တရက် ရေကြီးမှု ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
ရေကြီးခြင်း ဆိုသည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ခြောက်သွေ့နေသော မြေနေရာများ ရေစီးမှုကြောင့် နစ်မြုပ်သွားခြင်းကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမ္မဂ္ဂ ရေကြီးမှု ညွှန်ကြားချက်၏ အဆိုအရ ပုံမှန်အားဖြင့် ရေဖုံးလွှမ်းမနေသော မြေများ ရေဖုံးလွှမ်းခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုသည်။ ရေစီးမှု ဆိုရာတွင် လှိုင်းများ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
ရေရှိရာနေရာများ ဖြစ်သော မြစ်များနှင့် ရေကန်များတွင် တာရိုးများ ပေါ်မှ ရေကျော်ခြင်း နှင့် ကျိုးပျက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရေလျှံကျပြီး အချို့သော ရေများ ၎င်းတို့ ပုံမှန် တည်ရှိရာ နယ်နိမိတ်မှ ကျော်လွန်ထွက်သွားသည့် အခါတွင် ရေကြီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ထို့ပြင် ရေစိမ့်မဝင်နိုင်သော မြေပေါ်တွင် မိုးရေများ အများအပြား ကျရောက်ခြင်းကြောင့်လည်း ရေကြီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရေကန်များ နှင့် အခြား ရေရှိရာ နေရာများ၏ အရွယ်အစားမှ မိုးရေချိန် သို့မဟုတ် ဆီးနှင်းပျော်ကျမှု အပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲတတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် အိမ်မွေးသတ္တဝါများ ရေနစ်ခြင်းတို့ မဖြစ်ပေါ်ပါက ထူးခြားမှု ရှိသည်ဟု မသတ်မှတ်ပေ။
မြစ်များအတွင်း ရေစီးနှုန်းမှာ မြစ်ကြောင်း၏ ရေထိန်းနိုင်မှု ပမာဏကို ကျော်လွန်သွားသည့် အခါတွင်လည်း ရေလျှံခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် မြစ်ကွေ့ မြစ်ကောက် နေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်များ၏ ရေလျှံကျနိုင်သော နေရာတွင် ရှိသော အိမ်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးနိုင်သည်။ မြစ်နှင့်ဆိုင်သော ရေကြီးမှုကို ရှောင်လွှဲရန် အတွက် မြစ်သို့မဟုတ် အခြား ရေရှိရာ နေရာများမှ အဝေးသို့ ပြောင်းလဲနေထိုင်နိုင်သော်လည်း လူများသည် မြေနေရာ ပြန့်ပြူးခြင်း၊ မြေဩဇာ ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် မြစ်ကို အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် မြစ်အနီးတွင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။
အချို့သော် ရေကြီးမှုများမှာ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းမှာ မိုးအရိပ်အယောင်မှပင် မမြင်ရသည့် အချိန်တွင် မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရေကြီးမှုများမှာ အိမ်အနီးအနား သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသော ဒေသတွင်း ရေကြီးမှုများ ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ မြစ်ဝှမ်းဒေသ တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်အောင် ကြီးမားသော ရေကြီးမှုများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ရေကြီးစဉ်အခါအတွင်း၊ လူများသည် ကုန်းပြင်မြင့်များ သို့ ရှောင်တိမ်းသင့်သည်။ ထိုသို့ ဘေးလွတ်ရာသို့ တိမ်းရှောင်ခြင်း ကို ဘေးလွတ်ရာ ရွေ့ပြောင်းခြင်း ဟုခေါ်သည်။
ရေကြီးစဉ် အတွင်း ဘေးပတ်လည်တွင် ရေများဝိုင်းနေသော်လည်း သောက်သုံးရန် မသင့်ပေ။ အကယ်၍ သောက်သုံးခဲ့ပါလျှင် ဝမ်းလျောခြင်း ၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေကြီးခြင်း ကို ကာကွယ်ရန် သောက်သုံးရေ စုဆောင်းခြင်း၊ သဲအိတ်များ စုဆောင်းခြင်း ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
မြစ်ချောင်းများမှ ရေကြီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ကမ်းနဖူးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေထိန်းနံရံများ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။
↑ MSN Encarta Dictionary. Flood. Retrieved on 2006-12-28. Archived 2009-10-31.
↑ Directive 2007/60/EC Chapter 1 Article2. eur-lex.europa.eu. Retrieved on 2012-06-12.
↑ Glossary of Meteorology (June 2000). Flood. Retrieved on 2009-01-09.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကြီးခြင်း&oldid=359020" မှ ရယူရန်
၃ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၀၆:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။